Rosia: “Tranonkalan’ny fahamarinana “ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2010 10:34 GMT
Tamin'ny herinandro lasa, nandefa vaovao mikasika ireo mpitoraka bilaogy Rosiana sy ny fomban'izy ireo, izay tena mivatravatra, sahy maneho ireo heloka bevava sy ny kolikoly eo amin'ny rafi-pitantanana, ny mpanentana ny fandaharana vahiny any Rosia ao amin'ny – Fahitalavitra Russia Today TV (RT) – . Ireto misy santionany avy amin'ny lahatsoratra naseho tamin'ny aterineto mifandraika amin'izay:
Vaovao nandeha tamin'ny 20 Septambra ity tantara ity . Ny ampitson'io andro io, vaovao hafa mikasika ny anjara toerana mavitrika raisin'ny tontolon'ny bilaogy Rosiana no niseho tao amin'ny I Rosia ao ambadik'ireo Lohateny lehibe (Amin'ny aterineto sy an-tsoratra , fiaraha-miasa amin'ny gazety maro manan-danja avy any ivelany):
Kanefa, toa mifanohitra ihany amin'izay tokony ho izy raha ny fahalalahana mampiasa ny aterineto Rosiana izay nahasarika ny sain'ny maro tato ho ato. Tamin'ny voalohandohan'ity volana ity , niezaka ny naneho ny “demokrasia niomerika” i Tangled Web, izay milaza mikasika ireo vaovao farany avy amin'ny U.S. Institute of Peace – Blogs and Bullets – momba ny tanjaky ny media vaovao:
Eto, tsy misy afa-tsy ny filazana ny tatitra 2010 avy amin'ny OpenNet Initiative, izay vakian'ny Country Profile on Russia toy izao:
Afaka mamaky bebe kokoa mikasika ny “fomba azo isafidianana ” amin'ny “fitantanana ” ny aterineto ianao ao amina toko iray hafa ao anatin'ilay tatitra, izay natokana ho an'ny trano fidirana amin'ny aterineto Rosiana . Raha ny heviny, na izany aza, maneho ny tsy hita maso izy ireo, ary angamba aza, mandray fanapahan-kevitra, izay tsy voatery ho voasakan'ny fetran'ny fahalalahana – amin'ny fanomezana hevitra ankapobeny mikasika ny filaminana (izany hoe tsy misy “firewalls [Avy amin'ny mpandika : rindrambaiko fanivanana ny hoe iza avy no afaka manao inona ao anaty tambajotrana solosaina] ” na fandrarana amin'ny tranonkala sasany ) – rehefa miato kely mandinika raha toa ka mety hisy fiantraikany goavana tokoa ny fahalalahana tafahoatra…
- Nanana ampahana horonantsary manokana mikasika ny tombontsoa azo amin'ny fahavitrihan'ny aterineto , ary ny sasany amin'ireo vokatra mety ho azo avy amin'izany any Rosia ny New York Times.
-Ny fahitalavitra Russia Today TV ihany koa no mba nahita tantara mikasika ny andrana tsy nahomby nataon'ny fitsarana any amin'ny tanàna farany atsinanana lavitra any Komsomolsk-on-Amur hanakana ny YouTube. Izay no manohy ny “andrana vaovao “ tena resahana be nataon'ny Kremlin: manokatra ny tolo-dalàna fanovana ny rafitry ny polisy izay natolony vao haingana mikasika ny gazety bokim-bahoaka, amin'ny aterineto.
Mety hoe hanehoana ny mariky ny fandrosoana angamba ireo, izay mety tsy dia nandrasan'ny maro loatra hoe ho avy rahampitso. Na izany aza, mety ho ohatra fotsiny ihany koa ireo amin'ny antsoin'i Tangled Web izay hanamarinany ny atao hoe “fomba fisainana taloha tany Rosia, toerana izay ny “tsar” no tena nanjaka tao ka ny mpiasam-panjakana antonontonony teo no tena notondroina ho mpanao kolikoly sy tokony ho saziana mafy amin'ny zavatra rehetra.”
Tokony ho lazaina na izany aza, fa izany demokrasia izany, – ny tena izy sy ny niomerika – dia hita ho azy foana eny ihany fa tena zara raha izy. Eny fa na dia ny demokrasia malaza Tandrefana maro aza dia manana olana lehibe amin'ny fidirana amin'ny aterineto ary koa ny fanaraha-maso , ka angamba i Rosia tsy tokony hotsaraina hentitra loatra ? Nefa moa, fa maninona kosa ny firenena raha nametraka izany tanjona izany ho azy irery?